70-Qof oo wadanka Suuriya ugu geeriyooday weerar gaas loo adeegsaday (sawiro) – Radio Daljir
Abriil 8, 2018 5:05 b 0
Weerar loo adeegsaday kiimika ayaa ku dilay 70-ruux magaalada Duuma ee ay mucaaradku ku xooganyihiin ee u dhow caasumadda Suuriya ee Dimishiq.
Weerarka ayaa sidoo kalle waxaa ku neef qababtoobay oo uu saamayn ku yeeshay boqolaal ruux, sida laga soo xigtay shaqaalaha gargaarka.
White Helmets, oo ah koox gargaar oo ka howgasha deegaanada ay mucaaradku maamulaan ee Suuriya ayaa sheegay weerarka dadka ugu badan ee uu waxyeeleeyey inay yihiin haween iyo carruur.
“Todobaadtan ku neef qabatoobay weerark ayaa geeriyooday, boqolaal kallena waxa ay ku jiraan xaalad neef qabatin” Raacid Al-Saalix oo ah madaxa kooxda White Helmets ayaa u sheegay warbaahinta Al-Jaziira, isagoo intaasi ku daray geerida inay kasii badan karta, iyadoo dad badan ay ku jiraan xaalad halis ah.
Waxaa uu sheegay Gaaska Cholorine-ka in loo maleynayo in la adeedsaday ama gaas kalle oo halis ah.
“Shaqaalaha White Helmet waxaa ay isku dayayaan inay caawiyaan dadka, si looga soo daad gureeyo goobaha ay colaaddu ka socoto lug , iyadoona gaadiid jirin” ayuu yiri sarkaalka u hadlay kooxdan.
Al-Saalix ayaa sheegay qoys doonayay inay ka baxsadaan duqaymaha xagga cirka ee weerarada daran inay neef qabootoomeen gaaska awgiis.
Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa beenisay dowladda oo horay loogu eedeeyey adeegsiga gaaska neerfaha wax yeela ee Sarin, inay weerarkan gaaska loo adeegsaday ay qaaday.